Tantaranny vahoaka jiosy
Fiteny semitika atsinanana
FiangonanAndriamanitra (Andro Fahafito)
Richard Stanton Avery
Leontine Sagan dia mpilalao, talen-koronantsary mizaka ny zom-pireneni Afrika Atsimo, Aotrisy, Aotrisy-Hongaria teraka ny 13 Febroary 1889 tao Budapest ary maty ny 20 Mey 1974
Joy Adamson dia mpanoratra, mpahaisiansan-javaboahary mizaka ny zom-pireneni Fanjakana Mitambatra, Aotrisy teraka ny 20 Janoary 1910 tao Aotrisy-Hongaria ary maty ny 3 Janoary 1980
Pedro Calderón de la Barca dia mpanoratra tantara tsangana, Poeta, mpanao asa soratra, mpanoratra mizaka ny zom-pireneni Espaina teraka ny 17 Janoary 1600 tao Madrid ary maty ny 25 Mey 1681 tao Madrid
Jean Cavalier Jacques Bousseau Giovanni Battista Bianchi Louis dAignan du Sendat Pedro de Ribera Joseph François Lafitau André Falquet Pierre Le Courayer Abigail Williams personnage Angelo Paglia Jakob Burckhard Giuseppe Valentini Antoine Fazy Cl ...
Barbara Radziwill Fernando de Toledo Oropesa Pontus de La Gardie Giovanni Battista Moroni Jean Goujon Antonio Valente Jacques Yver Ercole Procaccini il Vecchio Nicolas de Bauffremont Pedro Ponce de León António Ribeiro Chiado Thoinot Arbeau Gaspa ...
Sekoly Ambony Loterana momba ny Teolojia
Ny Sekoly Ambony Loterana momba ny Teolojia, izay hafohezina aminny hoe S.A.L.T. na SALT, dia ambaratonga ambony indrindra ao aminny fianarana teolojia ao aminny Fiangonana Loterana Malagasy, izay manofana mpianatra mandritra ny telo taona. Ny ta ...
Ny kroazada fahadimy dia fanafihana miaramila mifanesy nataon ny Kristiana ka ny tanjona tamin izany dia ny nanani-bohitra ny soltanata aiobidan i Ejipta sy ny haka ny ampahan-taniny mba hahafaha-mampifanakalo ny tany azo amin ny tanin ny Fanjaka ...
Ny Adizaoza no vintana fahatelo ao aminny fanandroana malagasy. Ny Adaoro no eo alohany ary ny Asorotany no manaraka azy. Eo amin ny Adizaoza no fitoeran ny sinibe ao an-trano.
Code Lyoko dia tantara antsarimihetsika mitohy frantsay noforonini Jérome Mouscadet ary nandeha teo aminny kanalim-pahitalavitra France 3 taminny 3 Septambra 2003 ary tamini Canal J taminny 1 Septambra 2004. Tapitra ny 10 Novambra 2007 ilay tanta ...
Ny Adijady no vintana fahafolo amin ny fanandroana malagasy manara-bolana. Ny Alakaosy no eo alohany ary ny Adalo no manaraka azy. Ny zoron-trano avaratra-andrefana no toerana omena azy. Tonom-bintana fanorenan-trano sy fampakaram-bady ny Adijady.
É, é dia ny soratry ny abidy latina. Izany dia hita ao aminny teny anglisy, ny anarana, ny anarana, ny anarana, Emilian-Romagnol, malagasy, frantsay, ny Anarana, ny anarana, ny Anarana, ny Anarana, ny anarana, ny Zavatra, ny Zavatra, ny Zavatra, ...
Ny fiteny rômana dia ireo fiteny maro nipoitra avy aminny fiteny latinam-bahoaka, izany hoe endriky ny fiteny latina ampiasaina aminny fifaneraserana andavanandro. Isanny fiteny rômana ny fiteny frantsay, ny fiteny italiana, ny fiteny portogey ar ...
Ny fiteny latiniana na fiteny latinô-faliska na fiteny italô-faliska dia sampan ny vondrom-piteny italika ao amin ny fianakaviam-piteny indô-eorôpeana. Ireto ireo fiteny latinô-faliska ireo: ny fiteny latina, ny fiteny faliska, ireo fiteny rômana ...
Ny fiteny italika dia vondrom-piteny ao amin ny fianakaviam-piteny indô-eorôpeana izay mizara ho sampana roa, dia ireo fiteny latinô-faliska sy ireo fiteny ôsko-ômbriana.
Ny fiteny kantôney, 粵語 dia fiteny sinoa tenenina any amin ny tapany atsimon i Sina, ao amin ny faritan i Guangdong, i Guanxi any Hong Kong ary any Macao. Samihafa amin ny fiteny sinoa mandarina ny fiteny kantôney ary betsaka noho ny fahasamihaf ...
Ny Japônezy dia mpamaritra anarana ampiasaina rehefa misy zavatra miresaka momba ny Japana, afaka tenenina koa hoe Japoney. Rehefa miresaka momba ny fiteny ny firaketana, dia tenenina hoe fiteny japoney, na fiteny japoney.
Filazam-potoana hoavy tsotra
Ny filazam-potoana hoavy tsotra dia filazam-potoanny matoanteny ao aminireo fiteny romana na aminy fiteny hafa sasany izay manambara ny fitranganny asa na ny toetra iray aminny fotoana hoavy. Ao aminny filaza tsotra no ahitana io filazam-potoana ...
Fanehoan-javatra mifintina sy mivelatra
Ny fanehoan-javatra mifintina dia iheverana hatraminny fanombohany ka hatraminny fiafarany ny asa na toetra lazainny matoanteny. Matetika mifangaro aminny fanehoan-javatra efa ny fanehoan-javatra mifintina ao aminny fiteny tsy manana marika hanav ...
Ny fitenÔily, izay antsoina fotsiny hoe Ôily dia fiteny rômana izay nivoatra tao aminny tapany avaratra ao Galia, avy eo tao aminny tao aminny tapany avaratri Frantsa, tao atsimoni Belzika ary tap aminireo Nosy Anglo-Normanda, ary noteneninny olo ...
Ny andry dia teny ampiasaina hampitohizana ny lazaina aminny entimilaza tsy matoanteny. Maro ireo fiteny mampiasa andry ka isanizany ny fiteny frantsay sy ny fiteny anglisy. Ireo fiteny ireo dia mampiasa matoanteny andry. Tsy ny fiteny rehetra no ...
Fahadiovana ny fiteny
Ny fahadiovana ny fiteny dia hetsika izay manan-tanjona ny "manadio" ny fiteny iray aminny alalanny fanalàna ireo zavatra izay lazaina fa mampahantra ny fiteny iray ary izay hita fa ratsy ho anny maha-izy azy. Ireo zavatra tiana halàna ireo dia: ...
Filazam-potoana hoavy efa
Ny f ilazam-potoana hoavy efa dia filazam-potoana manambatra ny hoavy aminny fanehoan-javatra efa sady enti-milaza ny fahavitanny asa na fisehoanny asa alohanny asa hafa samy ao aminny fotoana hoavy. Ahitana io filazam-potoana io ny fiteny latina ...
Filazam-potoana lasa efa
Ny filazam-potoana lasa efa dia filazam-potoana manakambana ny filazam-potoana lasa sy ny fanehoan-javatra efa ka ilazana asa na toetra nitranga alohanny asa na toetra niseho taminny fotoana lasa. Atao hoe filazam-potoana lasanny lasa ihany koa i ...
Ny roifantaka dia hazo madinika mafy sy misy tsilo, isan ireo ataon ny Malagasy hoe roy. Maro ny zavamaniry antsoina amin ny hoe roifantaka, ka isan izany ireo mitondra anarana ara-tsiansa hoe Gymnosporia divaricata, Gymnosporia leptopus, Carissa ...
Ny Bienville dia tanàna ao aminny departementani Seine-et-Marne, ao Île-de-France, any Frantsa. Ny misy anny departementani Somme dia any avaratri Picardie.
Ny Briot dia tanàna ao aminny departementani Seine-et-Marne, ao Île-de-France, any Frantsa. Ny misy anny departementani Somme dia any avaratri Picardie.
Étienne Lenoir dia Mpamorona, injeniera mizaka ny zom-pireneni Frantsa, Belzika, Loksemborga teraka ny 12 Janoary 1822 tao Loksemborga ary maty ny 4 Aogositra 1900 tao Frantsa
Jan Adriaanszoon Leeghwater dia injeniera sivily, injeniera mizaka ny zom-pireneni Nederlandy teraka ny 1 Janoary 1575 tao Nederlandy ary maty ny 1 Janoary 1650
Cornelis Lely dia mpanao politika, injeniera sivily, injeniera mizaka ny zom-pireneni Nederlandy teraka ny 23 Septambra 1854 ary maty ny 22 Janoary 1929
1857: Johann Sahulka - injeniera Benedetto Croce 1866 Heinrich Kühn - mpaka sary 1735: Johann Samuel Schröter - mpahaisiansan-javaboahary 1822: Thomas Bouch - injeniera sivily, injeniera 1860: Nestor Crahay - injeniera 1859: Leonid Artamonov - in ...
1911: Raymond Abrashkin - talen-koronantsary, mpanoratra senariô, mpanoratra, mpanoratra tantara lava 1841: Richard Abbey - injeniera Ouliana Semionova - mpilalao basikety Alexander Szatmári 1925: Jack Smight - talen-koronantsary, mpamoaka horona ...
Nahmanide Ezzelino III da Romano Tolui Frédéric II du Saint-Empire Jacopo Contarini Marguerite de Courtenay-Namur Claire dAssise Pierre-Roger de Mirepoix Albertet de Sisteron Siegfried III von Eppstein
Sven Tumba dia mpilalao baolina kitra mizaka ny zom-pireneni Soeda teraka ny 27 Aogositra 1931 tao Stockholm ary maty ny 1 Oktobra 2011 tao Stockholm
Alf Sjöberg dia talen-koronantsary, mpanoratra senariô, mpilalao mizaka ny zom-pireneni Soeda teraka ny 21 Jiona 1903 tao Stockholm ary maty ny 17 Aprily 1980 tao Stockholm
Erland Josephson dia mpilalao, mpanao asa soratra, talen-koronantsary mizaka ny zom-pireneni Soeda teraka ny 15 Jiona 1923 tao Stockholm ary maty ny 25 Febroary 2012 tao Stockholm
Fredrik Ljungström dia injeniera, mpiantoka mizaka ny zom-pireneni Soeda teraka ny 16 Jiona 1875 tao Stockholm ary maty ny 18 Febroary 1964 tao Stockholm
Vilgot Sjöman dia mpanoratra, talen-koronantsary, mpanoratra senariô, mpanao asa soratra mizaka ny zom-pireneni Soeda teraka ny 2 Desambra 1924 tao Stockholm ary maty ny 9 Aprily 2006 tao Stockholm
Olle Hellbom dia talen-koronantsary, mpanoratra senariô mizaka ny zom-pireneni Soeda teraka ny 8 Oktobra 1925 tao Stockholm ary maty ny 5 Jiona 1982 tao Stockholm
Anders Knutsson Ångström dia mpahay fizika, mpamorona mizaka ny zom-pireneni Soeda teraka ny 28 Febroary 1888 tao Stockholm ary maty ny 27 Oktobra 1981 tao Stockholm
August Strindberg dia mpanoratra tantara tsangana, mpanoratra, Poeta, mpanao asa soratra, mpanoratra tantara lava, mpanoratra ny tantaranny fiainany mizaka ny zom-pireneni Soeda teraka ny 22 Janoary 1849 tao Stockholm ary maty ny 14 Mey 1912 tao ...
William Edward Harney dia mpahaisiansan-javaboahary mizaka ny zom-pireneni Aostralia teraka ny 18 Aprily 1895 ary maty ny 31 Desambra 1962 tao Queensland
Judy Morris dia mpilalao, mpanoratra senariô, talen-koronantsary mizaka ny zom-pireneni Aostralia teraka ny 1 %s 1947 tao Queensland ary maty ny 1 1947
Ny fiteny diirbàla dia fiteninny tompon-tany ao Aostralia izay efa tsy misy mpiteny afa-tsy olona miisa eo anelanelanny 6 sy 29 teo anelanelanny taona 1970 sy 2010 ao aminny tapany avaratri Queensland. Isanny zana-tampana diirbaliana ao aminny fi ...
Hossein Shahabi dia talen-koronantsary, mpanoratra senariô, mpamoaka horonantsary, mizaka ny zom-pireneni Iran teraka ny 20 November 1967 tao tabriz iran.
Ny manga dia voankazo avy amin ny zavamaniry mitovy anarana aminy, antsoina amin ny anarana ara-tsiansa hoe Genus Mangifera, hazo ao amin ny fianankavian ny Anacardiaceae. Avy any India ny manga, ary volena eny amin ny faritra manana toetanin-jan ...
Ny haitsikerafiteny na haiteny dia ny fandinihana ny fitenin ny olombelona. Izay no mampiavaka azy amin ny fitsipi-pitenenana izay mamisavisa ny fomba fiasan ny fiteny iray. Ny mpahaitsikerafiteny voalohany dia ny indianina Panini izay nanoratra ...
Ny filaza mirary dia endriky ny matoanteny ampiasaina hilazana ny firariana sy ny fanantenana ary ny faniriana. Hita ao aminny fiteny grika taloha, ny persana taloha, ny sanskrity, ny albaney, ny japoney, ny finoa ary ny torka ny filaza mirary.
丁 dia kanji ampiasainny fiteny japoney, ny fiteny koreanina ary ny fiteny sinoa. Voasokajy ao aminny tōyō kanji 当用漢字 tōyō kanji, kanji fampiasa) ity kanji ity. Ny tōyō kanji dia kanji miasa indrindra aminny fiteny Japoney, ny isany dia misy ...
Io soratra io dia manamarika ny -n farany. Rehefa misy kana na soratra afa eo arinany. Tandremo, りんえん dia voasoratra rinen aminny soratra latina, fa tsy rinen りねん.
Í, í dia taratasy iray ao ny Anarana, ny anarana, ny Anarana, ny anarana, ny anarana, ary ny Tatar fiteny, izay matetika no mampiseho ny ela be /izaho/ zanatsoratra. Ity endrika hita ao ihany koa ny anarana, ny Anarana, ny Zavatra, portogey, espa ...